Manao ahoana ny fandehan'ny lalan'ny soavaly | Noti Soavaly
Manao ahoana ny rafi-piterahana amin'ny soavaly
Jenny monge | | Fahasalamana sy fikarakarana
Ao amin'ny lahatsoratr'i Androany dia lazainay aminao ny iray amin'ireo singa fototra amin'ny zava-manan'aina rehetra: ny rafi-pandehanana. Ary manokana ny an'ny equines.
Ny biology izay manam-pahaizana manokana amin'ireto biby ireto dia nilaza fa karazana soavaly 300 isan-karazany no hita. Ny karazany tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy, na amin'ny fisehoana ivelany an'ny biby, na eo aza ny Ny fiasan'ny vatana dia mitovy amin'ny mampivelatra sy miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny fananana karazana iray ihany amin'ny tontolon'ny biby. Noho izany, momba ny rafi-pandehanan'izy ireo, na inona na inona karazany, ny zavatra azonao atao ao amin'ilay lahatsoratra dia mihatra amin'ny soavaly rehetra, na inona na inona karazany.
Fantatsika tsara kokoa ve ity faritra amin'ny tenan'ireto biby tsy mampino ireto?
Ny fiasan'ny rafi-pandehanan'ny rà dia mitovy amin'ny olombelona na amin'ny biby mampinono hafa. SYNy rafi-pandrefesana dia misy ny rafi-pitatitra fo, noforonin'ny fo sy ny lakan-drano nivezivezy ny rà, ary amin'ny alàlan'ny rafitra lymphatic. Ny taova fototry ny rafi-pandehanana dia ny fo, izay miandraikitra ny fandatsahan-dra amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny lalan-drà, lalan-drà ary capillaries. Etsy an-danin'izany, ny rafitra lymphatic dia miforona amin'ny alàlan'ny lalan-dra, amin'ny lymph node sy taova roa: ny spleen sy ny thymus. Izy io dia miandraikitra ny hery fiarovan'ny zavamananaina mampinono.
1 Ny rafi-pitovizan'ny kardia
1.1 Ny fo
2 Ny rafitra lymphatic
Ny rafi-pitovizan'ny kardia
Ity rafitra ity dia miandraikitra ny fandefasana sy ny fampiroboroboana ny ra ka manondraka ny vatana iray manontolo. ny soavaly olon-dehibe antonony manana rà 9 litatra amin'ny vatanao Ilaina ny rà ho mpanondrana akora ilaina amin'ny vatana toy ny: sakafo, oxygen, sela ao amin'ny hery fiarovan'ny vatana, sns. Ary izy io koa dia manampy amin'ny fanadiovana ny vatana amin'ny alàlan'ny fitaterana fako na dioksidan'ny karbaona. Toy ny hoe tsy ampy izany dia miandraikitra ihany koa ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny vatana.
Ity rafitra ity Manana boribory roa izy io, ny iray tompon'andraikitra amin'ny fanaronana ny faritry ny havokavoka ary ny iray kosa mitondra ny ra mankamin'ny sisa amin'ny vatana. Ireo boriboritany roa ireo dia boribory, manomboka ary mifarana ao am-po.
Ireo faribolana ireo dia mampiseho ny lamina amin'ny toerana isalovan'ny ra: fo, lalan-drà, arterioles, tamba-jotra capillary, venules, lalan-drà ary fo.
El pulmonary circuit dia tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny fifanakalozana entona ao amin'ny havokavoka. Ny fiparitahan'ny rà ao amin'ny faritra avokavoka dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famelomana ireo singa mandrafitra ny havokavoka, ny fananganana indray ny sela ary ny fizarana ny oxygen azon'ny vatana.
Ny fo dia vita amin'ny hozatra hozatra ary maneho endrika boribory kokoa amin'ny tranga maha-olombelona. Ny fon'ny soavaly efa lehibe dia mety milanja 3,5 kg eo ho eo. Toy ny amin'ny biby mampinono sisa, ny fon'ny soavaly dia misy vava efatra: ventricle roa, izay no mandroso ra, ary atria roa, ny iray manangona rà avy amin'ny havokavoka ary ny iray avy amin'ny vatana sisa.
Ny fo dia voalamina eo anelanelan'ny habaka intercostal faharoa sy fahenina amin'ny fitoviana.
Niresaka momba ny karazana fantsona maro samihafa hita ao amin'ny rafi-pandrefesana isika, izao dia hijery azy ireo miaraka amin'ny fifantohana bebe kokoa.
Izy ireo dia lakandrano izay mitondra ra avy amin'ny fo mankamin'ny taova hafa ao amin'ny vatana. Fantsona matevina izy ireo satria tsy maintsy mahatohitra ny tosidra ateraky ny fantsom-po. Ao anatin'ireo arteria dia misy fanasokajiana samihafa izay tsy hotononintsika amin'ity lahatsoratra ity ihany, ary izy ireo dia: lehibe na elastika, salantsalany na hozatra, ary kely na arterioles.
Ny capillaries dia lalan-dra kely dia kely tokoa. Ao amin'izy ireo dia misy fifanakalozana molekiola eo anelanelan'ny sela sela sy ny ra.. Izy ireo dia voalamina ao anaty vondrona antsoina hoe vaskulaires vaces, izay tena midadasika sy mandrakotra ny taova rehetra.
Izy ireo dia manana firafitra mitovy amin'ny an'ny arteria ary sokajiana ihany koa arakaraka ny habeny: lalan-drà lehibe, lalan-drà ary lalan-drà na lalan-drà kely. Ny lalan-drà antonony, izay manodidina ny 10 mm ny habeny, no be indrindra.
Ny lalan-drà Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fitondrana ny ra avy amin'ny capillaries amin'ny ra mankany amin'ny fo. Izany ve ireo mazàna izy ireo dia mitondra ny fako sy ny gazy karbonika. Misy dia misy maningana toy ny lalan-drà pulmonary izay mitondra oksizenina hizara azy.
Ny rafitra lymphatic
Ny fantson'ny lymphatic dia mitondra lymph, ranoka iray izay angonina ao amin'ny sela sy taova manerana ny vatana ary apetraka ao amin'ny lalan-drà lehibe.
Ny rafitra lymphatic dia ny miandraikitra ny fitazonana ny fifandanjan'ny tsiranoka amin'ny alàlan'ny fanidinana ny tsiranoka interstitial be loatra amin'ny ra, dia tompon'andraikitra amin'ny fiarovana amin'ny mihetsika toy ny sivana manohitra mikraoba isan-karazany izay miditra amin'ny vatana ary manome antoka ny fiarovan'ny vatana fiarovana. Izy io koa dia manampy ny rafi-pitabatabana amin'ny mifehy ny tosidran'ny lalan-drà sy lalan-drà.
Raha miasa tsy mety na miharatsy ity rafitra ity dia miseho ilay aretin'ny lymphatic antsoina hoe lymphangitis.
Ny Lifangitis dia mety ho ulcerative (areti-mifindra mikraoba) na epizootic (areti-mifindra fungal).
Taova roa tena ilaina ao amin'ny rafitra lymphatic: ny spleen sy ny thymus. Ny momba izany dia tianay holazaina bebe kokoa.
Io no tazomoka lymphatic lehibe indrindra ary miandraikitra ny fiasan'ny hery fiarovana sy hematopoietika. Voahosotry ny rafi-dra mahery izy io, manala ny sela mena simba tsy hivezivezy ary miara-mitazona ny sela.
Ity taova bilobed ity izay eo akaikin'ny fo dia omen'ny lalan-dra. Manana ny fiasa lehibe hatrany am-bohoka ka hatramin'ny fahamaotiana ary eo no matotra ny lymphocytes T.
Ary farany, izahay dia te-hanokana ampahany kely amin'ny maha-zava-dehibe ny fizahana klinika ny soavalinay, satria Na dia tsy miseho toy ny an'ny karazana biby mampinono aza ny ratram-po ao amin'izy ireo, dia misy lesoka marobe sy manan-danja izay tsy maintsy hamarinina tsara. Noho izany, nanolorana olona ho matihanina hijery ny soavalintsika indraindray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Fahasalamana sy fikarakarana » Manao ahoana ny rafi-piterahana amin'ny soavaly